anaty ala Jackpots anaty ala Jackpots
anaty ala Jackpots
0Te hahatsapa ny Jungle traikefa nahafinaritra sy mahatsapa toy ny raha mitsambikina tahaka ny biby avy etsy sy eroa? Andramo ny tananao amin'izao mahatahotra indrindra sy faran'izay mahafinaritra lalao- Ala Jackpots novokarin'ny Rafitry Gaming. Ho voasariky ny tany am-boalohany indray andro rehefa mbola kely dia hihaona ny tena hidera, ary naniry ny sariitatra Clip avy ny taona- ny Adventures ny Mowgli miorina amin'ny Jungle Boky avy Rudyard Kipling.
Rafitra Gaming dia UK ara developer ary dia ampahany amin'ny Alemaina ny Gauselmann Group. Ny paikady ekipa ny Rafitry dia miezaka ny hampahafantatra ny slot lalao mifototra amin'ny foto-kevitra toy ny mahazatra no nataony ho an'ny Jungle Jackpots. Izany avy hatrany dia manome ny mpilalao ny faniriana hilalao. Izany ihany koa ny mpivarotra manome fahafahana tsy manam-paharoa-barotra. Rafitra Gaming no namorona mampientam-po maro toy izany lalao, na ivelan'ny aterineto sy ny aterineto slots ho an'ny eran-Casino tsena.
The 5 miraingiraingy azon'ny napetraka dia naorina tao amin'ny Jungle tontolo iainana ny flickering pejy amin'ny taratasy mari-pankasitrahana Jackpots, manome ny anarana marina- anaty ala Jackpots. manana 20 paylines.
Ny toetra amam-panahy lalao tsirairay manana zavatra na hafa ho fanomezana ho any ny mpilalao. Ohatra, Raha mahita ny elefanta stomping eo afovoan'ny ny reels, hatramin'ny 4 reels dia hatrany mitodika any bibidia. koa, Raha mahita ny gidro niakatra ambonin'ny reels, dia afaka mitarika azy mba haneho ny fivoaky ny marika stacked. Misy ihany koa endri-javatra tombony mahafinaritra natolotry ny kaa na ny bibidia ny lalao. Raha manidy eo amin'ny toerany, dia manome safidy ny mpilalao iray hisafidy avy 3 harona, mandefitra samy hafa karazana ny tombony izay mety ho maimaim-poana na manao kofehy ireny, na fanampiny tampon-tanety, ao amin'ny slot. Ny iray tamin'ireo harona dia afaka ihany koa ny farany ny lalao.
Ny hilokana isan-karazany manomboka avy £ 0,20, ary miakatra ny £ 500 isan-kofehy ireny. Ny marika ampiasaina indrindra dia ny lalao Logos, miaraka amin'ny midedadeda fanilo, voankazo vilia baolina, ary bibidia dian-tongotra.
Anisan'ny tombontsoa hafa nanatitra ireo ny Mistery ny Baloo Bagheera loka sy ny Hot Streak. Azonao atao ihany koa ny hahazo ny lokan'ny ny vola ka ho 1000 indraindray ny Bet vola amin'ny alalan'ny Mowgli Izay mitandrina swinging amin'ny iray paoma, ary misy ny paoma kisendrasendra manambara izany vola loka. Azonao atao ihany koa ny nametraka vola io loka tandindomin-doza raha tsy afa-po loatra amin'ny loka ity. Na izany aza, izany dia mety hitarika koa any amin very ny efa nahazo loka vola.
Jungle Jackpots no tsara nijanona hamono ny lalao rehetra hetaheta. Saika ny rehetra ny lalao amin'ny alalan'ny Rafitry Gaming nahazo tanana aminy maro ho toy ny endrika ekipa dia miezaka ny manosika hatrany famoronana fetra eo amin'ny famoronana izany slots izay mahasoa ny Casino mpandraharaha, ary voly ny mpilalao tamin'izany andro izany. Ary izy efa nanao ny asa mamiratra amin'ny Jungle Jackpots.
Te-mba Hahazoana Big? Download ny Blackjack Strategy…
UK Casino Awards tombontsoa Online – £ 5 Free ny mihodina Ankehitriny!
Slotfruity.com dia Powered by Nektan (Gibraltar) Limited, Fahazoan-dalana avy amin'ny Governemanta ny Gibraltar (RGL No.54) ary ny fahazoan-dalana 000-039107-R-319400-006 navoakan'ny UK Filokana Commission. Customer Support: +44(0)203 457 3251 / slotfruity.support@nektan.com